Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa ku dhajiyay barasaabkii hore ee Iowa Tom Vilsack inuu mar lab | KWIT
Somali News 12.10.2020
Saraakiisha caafimaadka dadweynaha ee Iowa ayaa soo dhejiyay 99 kale oo laxiriira coronavirus, taasoo sare uqaaday tirada dhimashada gobolka ilaa 3,120. Gobolka ayaa toddobaadkan wax ka beddelay habka loo tiriyo dhimashada COVID-19 taasna waxay ku dartay 399 dhimasho wadarta guud toddobaadkan.
Kiisaska wanaagsan ayaa ku kordhay 2,246 taas oo riixeysa wadarta guud ee gobolka in ka badan 250,000. Si kastaba ha noqotee, isbitaallada iyo kiisaska cusub ee wanaagsan ayaa ka sii yaraanaya, taasoo siineysa saraakiisha daryeelka caafimaadka rajo in Iowa laga yaabo inay ka fogaato kororka Thanksgiving ka dib. Welwelku weli wuu sii socdaa inta lagu jiro hawlaha isu-tagga fasaxyada Kirismaska ​​iyo Sannadka Cusub.
Caafimaadka Degmada Siouxland ayaa sheegay maanta in ay jireen 107 xaaladood oo lagu daray wadarta tirinta kiisaska 24kii saac ee la soo dhaafay. Degmada Woodbury wali waxay la kulmaysaa faafin ballaaran oo bulshada ah oo ah COVID-19
MercyOne Siouxland Medical Center iyo UnityPoint Health - St. Luke’s waxay gaarayaan ganacsatada si ay uga codsadaan caawintooda la dagaalanka COVID-19. Isbitaalada ayaa weydiisanaya milkiilayaasha meheradaha inay ka dalbadaan shaqaalaha iyo macaamiisha inay xirtaan waji-duub inta ay ku jiraan dukaamada.
UnityPoint waxay leedahay maanta waxay kordhinayaan mushaarka ugu yar ee saacadlaha ah ee shaqaalahooda ilaa $ 15 saacadii. Mushahar kordhinta ayaa dhaqan galaysa bisha janaayo. Shaqaalaha ka shaqeeya nadaafadda guriga, adeegga cuntada, kaalmada kalkaalinta caafimaadka, iyo doorarka kale ee kaalmaynta bukaan socodka, ayaa u badan inay ka faa'iideystaan.
Maxkamadeynta Cristhian Bahena Rivera ayaa dib loo dhigay ilaa guga soo socda sababo la xiriira cudurka faafa ee coronavirus.
Bahena Rivera waxaa lagu eedeeyay inuu dilay Mollie Tibbets oo ahayd ardayad wax ka dhigta jaamacada Iowa xagaagii 2018
Maxkamadeynta ayaa loo qorsheeyay inay ka bilaabato 25-ka Janaayo maxkamada Scott County Courthouse ee Davenport laakiin hada dib ayaa loogu celiyay 17-ka May.